Kenya oo markale caddaysatay inay FOOWDO u joogto Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Kenya oo markale caddaysatay inay FOOWDO u joogto Somalia
Kenya oo markale caddaysatay inay FOOWDO u joogto Somalia
(Nairobi) 09 Feb 2020 – Dowladda Kenya oo si rasmi ah markii ugu horreysay uga hadashay arrinta Cabdirashiid Janan oo kasoo baxsaday DF Somalia, ayaa si uun u qiratay inay foowdo ka waddo Somalia.
Xoghayaha Wasarad Dibadeedka Kenya, Macharia Kamau oo u warramay wargeyska Daily Nation ayaa ku dooday inaysan waxba ka qaban karin arrinta Janan, balse ay arrintaasi u taallo hay’adaha amaanka, sida uu yiri.
“Arintu gacanteenna kuma jirto, waxaan kugula talinayaa inaad la xiriirto kuwa laga yaabo inay wax ka ogyihiin, oo ah ciidamada amniga,” ayuu isku difaacey Md. Kamau oo bixinaya jawaab meeraysi ah.
Yeelkeede, isla warqaadka Daily Nation ayaa sheegay inay Kenya oo markii horeba la sheegay inay Janan dayuurad ku keentay halkaasi, ay iminka ku ilaalinayso guri ku yaalla Mandheera, kaddib markii laga soo eryey Beled Xaawo.
Waxaa kale oo ay u ogolaatey inuu halkaa ka dhigto dhufays uu uga soo duulo DF Somalia, taasoo kasoo horjeedda joogitaanka Kenya oo sheegata inay ka mid tahay ilaalinta nabadda iyo nidaamka ay kala dagaallamayso Somalia.
Shaqada AMISOM ayaa ah inay si toos ah u taageerto ugana amar qaadato DF Somalia.
Previous articleXOG CUSUB: Ardaydii shalay Boosaaso ka hadashay oo la xir-xirey
Next articleDamaca PUNTLAND iyo dayrada Nabad iyo Nolol (5 qodob oo laga calaameeyay dabuubtii Deni)